Baadhista karonaha - koronatest somalisk - Lørenskog kommune
Baadhista karonaha - koronatest somalisk
Marabtaa balan ah inaad iska barto karona, waxaad ka samaysan kartaa nedka. Hadaba si aad balanta nedka uga dalban kartid waxaad u baahan tahay inaad cinwaan ku leedahay Lørenskog iyo BankID/ ID mobilka.
Hadii aanad haysan BankID, ama aanad degenayn Lørenskog, waxaad wici kartaa taleefanka karonaha ee ah 67495027, si aad balan u dalbato. Waxaa la wici karaa isniin –sabtikl: 08:30-21:30 iyo axadda kl: 08:30-21:30.
Baarista karonadu waxay u dhacdaa sidan Jonas Ruud / Lørenskog kommune
Sist endret15.11.2021 09.50